Musk သည် Tesla ကုန်ပစ္စည်းအတွက် DOGE ငွေပေးချေမှုများကို ကြေညာပြီးနောက် Dogecoin သည် 25% ခုန်တက်သွားသည်။ - Token Myanmar
Musk သည် Tesla ကုန်ပစ္စည်းအတွက် DOGE ငွေပေးချေမှုများကို ကြေညာပြီးနောက် Dogecoin သည် 25% ခုန်တက်သွားသည်။
Dogecoin (DOGEElon Musk က သောကြာနေ့တွင် စျေးနှုန်းများ သိသိသာသာ မြင့်တက်ခဲ့သည်။ Tesla သည် ၎င်းကို ငွေပေးချေမှုအဖြစ် စတင်လက်ခံမည်ဖြစ်သည်။ ကုန်ပစ္စည်းအတွက်။
Dogecoin ဖြင့် Tesla ရောင်းကုန်
— Elon Musk (@elonmusk) ဇန်နဝါရီ ၁၄၊ ၂၀၂၂
ကြေငြာပြီးနောက် DOGE စျေးနှုန်း 13% နီးပါးခုန်တက်သွားတယ်ရက် 30 မြင့်မားသော $ 0.2150 အထိရောက်ရှိခဲ့သည်။ Musk ၏ Dogecoin တွစ်တာတွင် ပျံ့နှံ့မှုမဖြစ်ပွားမီတွင် ၎င်း၏ ဘက်လိုက်ရွေ့လျားမှုသည် ပိုမိုကြီးမားသောနေ့တွင်းလူထုစုဝေးပွဲ၏ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအဖြစ် ဖြစ်လာခဲ့သည်။
အမြတ်ရယူခြင်းအတွက် $0.1986 သို့ လျှော့မပြင်မီ သောကြာနေ့တွင် DOGE စျေးနှုန်းသည် 25% ကျော်တက်သွားသည်။
DOGE/USD နာရီအလိုက် စျေးနှုန်းဇယား။ အရင်းအမြစ်- TradingView
Bitcoin ထက် ပိုကောင်းပါတယ်။
Tesla သည် ၎င်း၏အွန်လိုင်းစျေးဝယ်ပေါ်တယ်တွင် DOGE ငွေပေးချေမှုရွေးချယ်မှုကို ပေါင်းစည်းလိုက်ပြီးနောက် Musk သည် တစ်လနီးပါးကြာလာသည်။ သူ့ဆန္ဒကို မျှဝေခဲ့သည်။ စမ်းသပ်မှုအခြေခံဖြင့် ငွေပေးချေမှုအဖြစ် cryptocurrency ကိုလက်ခံရန်။
Musk ၏ DOGE ကို ချစ်မြတ်နိုးခြင်း၏ အလယ်ဗဟိုမှာ ၎င်း၏ "Bitcoin ထက် ပိုမိုကောင်းမွန်သော အင်္ဂါရပ်များ၎င်း၏လျှပ်စစ်သုံးစွဲမှုနည်းပါးခြင်းကြောင့် ငွေပေးချေမှုရွေးချယ်မှုအဖြစ် အဓိကဖြစ်သည်။ Time မဂ္ဂဇင်းသို့ Musk ၏ ပြောကြားချက်မှ ကောက်နှုတ်ချက်တွင် ၎င်းက ဤသို့ရှင်းပြခဲ့သည်-
"အခြေခံအားဖြင့်၊ Bitcoin သည် အရောင်းအ၀ယ်ငွေကြေးအတွက် ကောင်းမွန်သော အစားထိုးတစ်ခုမဟုတ်ပါ။ ၎င်းကို ရီစရာပြက်လုံးတစ်ခုအဖြစ် ဖန်တီးထားသော်လည်း Dogecoin သည် အရောင်းအ၀ယ်များအတွက် ပိုသင့်တော်ပါသည်။"
ဘီလီယံနာ လုပ်ငန်းရှင် က ထပ်လောင်း အလေးပေး ပြောကြား ခဲ့သည်။ အရောင်းအ၀ယ်တစ်ခုအတွက် Bitcoin ၏ကုန်ကျစရိတ်သည် မြင့်မားသည်။ ၎င်း၏ အရောင်းအ၀ယ်ပမာဏသည် DOGE နှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက နည်းပါးနေပါသည်။ ရလဒ်အနေဖြင့် Bitcoin သည် ကောင်းမွန်လာနိုင်သည်။ တန်ဖိုးရှိသော ပိုင်ဆိုင်မှုတစ်ခုဖြစ်သည်။. အခြားတစ်ဖက်တွင်၊ DOGE သည် လူများကို သုံးစွဲရန် တွန်းအားပေးမှုကို ဆက်လက်လုပ်ဆောင်နိုင်သည်။
DOGE အတွက် နောက်တစ်ခုက ဘာလဲ။
DOGE သည် ထိပ်ပိုင်းခွဲထွက်မှုအတွက် လပေါင်းများစွာ ခုခံနိုင်မှုလမ်းကြောင်းကို စမ်းသပ်ထားသောကြောင့် Dogecoin စျေးကွက်တွင် နောက်ဆုံးဝယ်ယူမှု အနည်းငယ် ကျဆင်းသွားသည်။
အသေးစိတ်တွင်၊ DOGE စျေးနှုန်းသည် 2021 ခုနှစ် မေလကတည်းက ၎င်း၏ နောက်ဆက်တွဲကြိုးပမ်းမှုများကို ကန့်သတ်ထားသည့် ကျဆင်းနေသော trendline ခုခံမှုအဖြစ်သို့ တွန်းပို့ခဲ့သည်။ သောကြာနေ့တွင်၊ လမ်းကြောင်းသစ်လိုင်းသည် DOGE ကို ၎င်း၏အတွင်းဘက်ထိပ်မှ $0.2150 မှ $0.1958 သို့ ထပ်မံပေးပို့ရာတွင် အရေးပါလာခဲ့ပါသည်။ .
DOGE/USD နေ့စဉ်စျေးနှုန်းဇယား။ အရင်းအမြစ်- TradingView
ဤအတောအတွင်း၊ Dogecoin ၏ ရက် 200-ထပ်ကိန်းရွှေ့ပျမ်းမျှ (ရက် 200- EMA; လိမ္မော်ရောင်လှိုင်း) သည် ဇန်နဝါရီ 14 ရက်နေ့တွင် ၎င်း၏အမြတ်အစွန်းများကို ကန့်သတ်ရာတွင် အဓိကအခန်းကဏ္ဍမှ ပါဝင်ခဲ့သည်။ အတူတကွ၊ ခုခံမှုမြစ်ဆုံသည် DOGE စျေးနှုန်းသည် ဆက်လက်ရှိနေသော အတက်လမ်းကြောင်းမှ ပြန်ဆုတ်သွားနိုင်ကြောင်း အရိပ်အမြွက်ဖော်ပြခဲ့သည်။ လာမည့်အစည်းအဝေးများတွင်။
ဆက်စပ်- Dogecoin ဖန်တီးသူသည် crypto လှူဒါန်းမှုများကို ခေတ္တရပ်ထားသောကြောင့် Mozilla ကို ပြစ်တင်ရှုတ်ချပါသည်။
ထိုသို့ဖြစ်ပါက၊ ၎င်း၏ မကြာသေးမီက ပံ့ပိုးမှုအဖြစ် ၎င်း၏ မကြာသေးမီက မှတ်တမ်းကြောင့် အမှားပြင်ခြင်းကို $0.1367 သို့ တိုးချဲ့နိုင်ခြေဖြင့် ၎င်း၏ 50-ရက်ကြာ EMA (ကတ္တီပါလှိုင်း) ကို ပံ့ပိုးမှုအဖြစ် စမ်းသပ်ရန် တိုကင်က အဆင်သင့်ဖြစ်နေမည်ဖြစ်သည်။
အပြန်အလှန်အားဖြင့်၊ ကျဆင်းနေသော trendline resistance နှင့် 200-day EMA တို့သည် Dogecoin စျေးကွက်တွင် ၎င်းတို့၏ နောက်တက်မည့်ပစ်မှတ်အဖြစ် ကုန်သည်များက $0.30 ကို မျက်စိကျစေနိုင်သည်။ $0.30 အဆင့်ဝန်းကျင်ရှိ ဧရိယာသည် အစောပိုင်းတွင် ခုခံမှုအဖြစ် ဆောင်ရွက်ခဲ့သည်။
'Wen Token?'- Polymarket ၏ Airdrop Futures Market အသစ်တွင် အဖြေများရှိသည်။